Calaamadaha Saddex-geesoodka ah: Calaamadaha Saddex-geesoodka ah ee ugu Wanaagsan iyo Sifooyinkooda | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | 21/04/2022 13:06 | La cusbooneysiiyay 22/04/2022 13:12 | Design Graphic, General
Naqshadaynta calaamaduhu waxay noqonayaan joomatari maalin kasta, mana aha wax la yaab leh in naqshadeeyayaasha badani ay adeegsadaan isticmaalka qaababka joomatari ee caadiga ah iyo kuwa fudud ee foomamkooda, sababtoo ah waxay yihiin walxaha ugu fiican si ay u matalaan wax badan oo aan la taaban karin iyo qaab ahaan waxa loogu talagalay lala socodsiiyo.
Taasi waa sababta qoraalkan, waxaanu kuugu soo bandhigi doonaa adduunka calaamadaha mar kale, laakiin sidoo kale qaababka joomatari. Immisa ka mid ah naqshadeeyayaasha ayaa ku matalay calaamadahooda qaabab sida saddex xagal. Curiye si heer sare ah loo asteeyay.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka ogaato nooca naqshadeynta, ha ka waaban inaad ku sii jirto boostadan, sababtoo ah waxaan kuu sheegi doonaa faahfaahin aad u xiiso badan.
1 Calaamadaha saddex xagal: waa maxay?
2 Calaamadaha saddex-xagalka ugu fiican
2.1 Gaadhiga Google
Calaamadaha saddex xagal: waa maxay?
Calaamadaha saddex-geesoodka ah waa calaamadahaas oo inta badan lagu matalo qaab joomatari oo gaar ah, kaas oo kiiskani yahay saddex-xagalka.
Saddex-xagalyadu waa xubno inta badan lagu garto kicinta dhinacyada sida koritaanka, diiradda, taageerada, dhiirigelinta, firfircoonida, sinnaanta, caddaaladda, sayniska iyo awoodda. Shaki la'aan, waxay yihiin dhinacyo aad muhiim u ah in lagu xisaabtamo qiyamka aasaasiga ah ee naqshadeynta. Waa tirooyin aad u matalo oo inta badan laga helo naqshadaha aqoonsiga.
Iyada oo ku xidhan sida geesoolayaasha u yaalliin ama u sawiran yihiin, waxay meteli karaan dhinacyo taban ama togan. Taas macnaheedu waa, la mid ma aha in la arko saddex xagal oo ka dhigan boos dhacay, marka loo eego mid kor u kacay oo leh meel qumman. Midka labaad waxa uu tilmaamayaa awood aad uga badan tii hore. Taasi waa sababta saddex-xagalka, haddii aan ka hadalno cilmi-nafsiga foomamka, waa curiye aad u isbeddelaya, kaas oo mar mar hore ayey u socon kartaa ama laba tilaabo dib u qaadi kartaa aan ka meermeerin. Waxaa la yaab leh sida ay qaababku u yeelan karaan labada macne.
Saddex-xagalka waxa lagu qeexaa geeso badan oo ka samaysan saddex qaybood oo toosan oo ay iskaga xidhmaan saddex geesood. Qaar badan oo ka mid ah dhinacyada shaxanka ayaa go'aamiya waxa aan naqaano xagasha gudaha iyo ilaalinta jaantus buuxa. Caadi ahaan waxay leeyihiin qaabab kala duwan, qaar aad u dheereeya ama kuwo kale oo sii fidsan, laakiin had iyo jeer waxay ilaaliyaan nuxur isku mid ah. Ka sokow, sidoo kale waxay leeyihiin dheelitir muuqaal ah oo gaar ah, Sababtan awgeed, waa mid ka mid ah jaantusyada, cilmi-nafsiga foomamka ama aragtida sawirka, had iyo jeer waxay u egtahay inay bixiso firfircooni gaar ah oo ka dhex muuqda qaybaha kale.
Waxaad la yaabi doontaa tirada calaamadaha ama calaamadaha u adeegsada jaantuskan sida naqshadda ugu weyn. Taasi waa sababta, hoos, aan u naqshadeynay liis dheer oo calaamado calaamad ah oo aad isla markiiba ogaan doonto.
Fiiro gaar ah u yeelo sababtoo ah waxaa xiiso leh inaad ogtahay sida ay u dabaqeen qaabkan aadka u xiisaha badan iyo qaabka gaarka ah ee naqshadahooda, iyo sida ugu fiican, sida saddexagalka u suurtagashay inuu noqdo qayb ka mid ah qaybta ugu muhiimsan ee calaamad ama shirkad. Ka tagista habkan booska weyn ee suuqa iyo wax kasta oo ka sarreeya qiimo weyn iyo farqi weyn oo u dhexeeya noocyada kale ee ay la tartanto.
Calaamadaha saddex-xagalka ugu fiican
Xigasho: Brand Logos
Shirkadda caanka ah iyo browserka internetka ee ugu weyn, Google. Waxay samaysay naqshad cusub badhtamihii 2016, iyada oo muujinaysa qaybtan qaybta Google Drive, taas oo ah kaydinta gudaha. Si tan loo sameeyo, waxa uu u adeegsaday waxa aan ku qiyaasno nooc saddex xagal ah.
dhinac kasta oo ka mid ahSaddex xagalkani wuu ka duwan yahay maadaama uu midab kale leeyahay, laakiin midab kastaa maaha in lagu doortay si aan toos ahayn laakiin sidoo kale wuxuu ilaaliyaa macnaha, maadaama ay u taagan tahay mid kasta oo ka mid ah hawlihiisa: Dukumentiyada, xaashida faafinta iyo bandhigyada caanka ah ee aan dhammaanteen naqshadeynay mar uun. Shaki la'aan, calaamad bixisa amniga ay shirkadu lafteeda siiso isticmaaleyaasheeda.
Haddii aan ku sii wadno Google, waxaan sidoo kale ogaanay in naqshadahooda ay sii wadaan ilaalinta xariiqda garaafyada. Si loo sii xoojiyo xoogga, waxay u isticmaaleen jaantuskan si la mid ah badhanka ciyaarta caanka ah ama gaarka ah, sidaas darteed magaciisii. Intaa waxaa dheer, ma aha oo kaliya inuu ku sii wado isla xariiqda garaafyada laakiin sidoo kale wuxuu xoojiyay mid kasta oo ka mid ah midabkiisa. Sidan ayuu midabyo kala duwan ugu daray qaababkiisa. laakiin had iyo jeer ilaalinta bilicda iyo qiyamka midabka ee ka dhigan shirkadda aad u badan.
Marna uma maleynaysid in astaanta caanka ah ee isboortiga ay sidoo kale geli doonto liiska calaamadaha ama calaamadaha saddex xagal. Laakiin runtu waa haa, shirkadda Talyaani ee la aasaasay 1911, ayaa ka tagtay qiyam badan iyo guulo badan oo iib ah.
Astaanteeda inta badan waxay ka kooban tahay weji wareegsan oo bixiya firfircoonida iyo dabeecadda isboortiga ee shirkadu rabto inay ka muuqato alaabteeda. Sidoo kale, intaas kuma eka, maadaama ay xarafka A u rogaan a saddex xagal oo ujeedadu tahay in la matalo buur, nooc ka mid ah jaantuska sare oo ka tarjumaya adkeysiga, xoogga ama dheelitirka muuqaalka.
Waa mid ka mid ah calaamadahaas aad aragto oo isla markiiba maskaxdaada ka baxsan. Ma aha oo kaliya inay qariso macnaha sababtoo ah naqshadeeda, laakiin sababta oo ah waxa shirkadu u taagan tahay. Naqshadeeyuhu wuxuu rabay inuu ka tarjumo dareenka raaxada ee qoraalkiisa iyo qaybta garaafyada, habkan, shirkadda safarku waxay rabeen in dhagaystayaasheeda ay dareemaan si isku mid ah mar kasta oo ay isticmaalaan codsiga.
Astaantu waxay ka samaysan tahay qaab u eg qalbi, oo bixisa kalgacal iyo jacayl, dhexda waxaa ku yaal nooc goobaabin ah oo ay ka dhigan tahay madaxa qofka gacmaha kor loo qaadayo ka dibna saddex xagal oo astaan ​​u ah bilawga astaanta. Shaki la'aan isku darka qaababka joomatari.
Shirkadda caanka ah ee telefishinka, oo caan ku ah samaynta fiidiyowyada YouTube ee ku saabsan guriga iyo dayactirka, ayaa sidoo kale qayb ka ah noocyada ugu sarreeya ee saddex xagal. Ku dar summada sare ama xagga sare ee astaanta, halkaasoo ay astaan ​​u tahay saqafka guriga. Iyaga oo la macaamilaya midab sida buluug, waxay siiyeen astaanta dhammaan hawlaha ay u taagan yihiin qiyamka.
Qiyaastu waa mid ka mid ah noocyada dharka ee isbeddelka ku sameeyay warshadaha sannadihii u dambeeyay. Waxaa loo arkaa calaamad-dhamaadka sare ee qiimaha alaabteeda iyo tayada ay bixiso. Laakiin waxa sidoo kale cajiib ah ayaa ah calaamadeeda, oo ka kooban saddex xagal oo rogan, taasoo tilmaamaysa dareenka qaylo-dhaan ama xaalad degdeg ah halkaas oo ay u taagan tahay xorriyadda ay shirkadu doonayso inay u soo bandhigto dadkeeda. Shaki la'aan fikrad wanaagsan maadaama Guess uu had iyo jeer rabay inuu wax ka qabto dadweynaha sida weyn loo saameeyay, kuwaas oo kiiskan ay yihiin dhalinyaro, dhagaystayaal awood u leh inay muujiyaan isbeddello cusub oo ku saabsan warshadaha moodada magaalada.
Reebok waa mid kale oo ka mid ah noocyada ka mid ah qaybaha isboortiga. Astaanta caanka ah waxay la shaqeysay ciyaartoy xirfadlayaal ah iyo dadka isboortiga taariikhda oo dhan. Ilaa dhowr sano ka hor, waxay go'aansadeen inay beddelaan naqshadeynta calaamadda iyagoo bixinaya nooc ka mid ah saddexagalka calaamadeeda. Sidan oo kale waxay u rogeen ujeeddada astaanta, iyagoo isku dayaya inay gaaraan dhegeystayaal aad u ballaaran., kana tagaya dhinaca ciyaaraha iyo xirfadda. Fikrad cajiib ah oo u baahan kaliya inay matasho saddex xagal guduudan.
Kooxda caanka ah iyo mid ka mid ah wakiilada ugu weyn ee birta culus ayaa sidoo kale ku biiraya liiska. Astaanta waxaa loo sameeyay nooc ka mid ah calaamadda biyaha halkaasoo xarfaha hore iyo kuwa u dambeeyaba ay ku fidsan yihiin calaamadda taasoo ka dhigaysa nooc ka mid ah wadarta saddexagalka astaanta. Sidan, waxay u taagan tahay wadarta xoogga, tamarta iyo awoodda ay kooxdu rabeen inay gudbiyaan tan iyo markii la aasaasay. Intaa waxaa dheer, midabkeeda madow ee dabeecadda ah waxay bixisaa xitaa xoog badan oo ay u baahan tahay, ma aha in la xuso qoraalka aadka u guuleysta iyo calaamado ay u isticmaaleen naqshadooda.
Summadaha shukulaatada ee ugu caansan Switzerland waxa kale oo ay ku taal calaamadda saddex xagal yar. Saddex-xagalka aynu ka hadlayno waxa ku jira buurta ugu muhiimsan dalka Switzerland oo helay magaca Matterhorn. Intaa waxaa dheer, sawir qarsoodi ah ayaa sidoo kale lagu muujiyay cad iyo dahabka qaybta garaafka, markan sawirka orso gaar ah. Matalaya jaakada hubka halka ay calaamaddu ka timaaddo. Waa mid ka mid ah calaamadaha ugu araga badan. Shakina la'aan, sumaddeeda iyo nashqaddeeduba waxay gaadheen tiro dad ah oo ka kala yimid dacallada adduunka.
Waxaa jira noocyo badan oo ku daray jaantus joomatari naqshadahooda aqoonsiga. Sida aan awoodnay inaan xaqiijino, saddexagalku wuxuu abuuraa nooc xoog iyo awood ah oo ka dhigaya calaamadda inay qaadato macno ka badan sidii hore.
Taasi waa sababta, mar kasta oo aad naqshadayso calaamad, maskaxda ku hay isticmaalka sawirkan cajiibka ah ee naqshadeyntaada, maadaama ay ka dhigi doonto astaantaada mid aad u xiiso badan. Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay naqshadeynta summada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » calaamadaha saddexagalka
Midabada dhexdhexaadka ah: isticmaalka iyo isku-dhafka